TOROHEVITRA HAHASAMBATRA NY FIANAKAVIANA Ampianaro Hahay Hitondra Tena Tsara ny Zanakao
MANONTANY NY MPAMAKY Manaiky ny Fitsaboana Rehetra ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Boligara Cebuano Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Zoloa
Ny Tilikambo Fiambenana | Febroary 2011
▪ Hoy i Jesosy: “Tsy ny olona salama no mila dokotera, fa ny marary.” (Matio 9:12) Te hilaza izy fa tsy voararan’ny Soratra Masina ny mankany amin’ny dokotera. Eken’ny Vavolombelon’i Jehovah àry ny fitsaboana sy fanafody omena azy. Te ho salama tsara foana sy ho ela velona mantsy izy ireo. Dokotera mihitsy aza ny Vavolombelon’i Jehovah sasany, toa an’i Lioka, Kristianina tamin’ny taonjato voalohany.—Kolosianina 4:14.
Tsy eken’ny Vavolombelon’i Jehovah anefa ny fitsaboana mifanohitra amin’ny toro lalan’ny Baiboly. Tsy manaiky hampidiran-dra, ohatra, izy ireo. Raran’ny Baiboly mantsy ny fampidiran-dra mba hihazonan’aina. (Genesisy 9:4; Levitikosy 17:1-14; Asan’ny Apostoly 15:28, 29) Raran’ny Tenin’Andriamanitra koa ny fitsaboana ampiasana “herin’ny maizina”, na misy ifandraisany amin’ny fanahy ratsy.—Isaia 1:13; Galatianina 5:19-21.
Maro ny fitsaboana tsy mifanohitra amin’ny fitsipiky ny Baiboly, ary izy ireny no fidin’ny Vavolombelona. Matetika izy ireny no tsara kokoa noho ny fitsaboana tsy eken’Andriamanitra.
Samy manana ny heviny momba ny fitsaboana ny olona. Ny fitsaboana mety amin’ny olona iray tsy voatery hety amin’ny hafa. Mety mbola te hanontany ny hevitry ny dokotera àry ny olona iray, mba hakana toky tsara momba ny aretiny.—Ohabolana 14:15.
Tsy voatery hitovy daholo ny fitsaboana fidin’ny Vavolombelona. Avelan’ny Baiboly hampiasa ny feon’ny fieritreretany mantsy ny Kristianina, rehefa tsy misy fitsipika voadika. (Romanina 14:2-4) Tokony hanadihady tsara izay fitsaboana atoro azy àry ny tsirairay, ka haka toky tsara raha tsy mifanohitra amin’ny feon’ny fieritreretany ilay izy.—Galatianina 6:5; Hebreo 5:14.
Rehefa hanapa-kevitra ny Kristianina iray, dia toy mpamily iray manatona sampanan-dalana be fiara. Hampidi-doza izy raha mandeha mafy be sy manaraka fotsiny an’ireo fiara eo alohany. Hendry kosa izy raha mandeha moramora sy mijery tsara ny fizotran’ny fifamoivoizana, izay vao mandeha. Toy izany koa ny Vavolombelona. Tsy tonga dia manapa-kevitra momba ny fitsaboana harahiny izy ireo na manaraka an-jambany fotsiny ny hevitry ny maro. Hadihadiny tsara kosa ilay izy ary dinihiny koa ny toro lalan’ny Baiboly, izay izy vao manapa-kevitra.
Tena ankasitrahan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny asa mafy sy fahafoizan-tenan’ireo dokotera. Faly koa izy ireo amin’ny fitsaboana omen’ireo mpitsabo ireo.
Inona no tokony ho fantatrao alohan’ny hisafidianana ny fomba itsaboana anao?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Febroary 2011